What Employees and Employers Really Value at Work ﻿
ဝန်ထမ်းများနဲ့ အလုပ်ရှင်များ၏ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း တန်ဖိုးထားကြသင့်သောအရာများ
အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းနိမ့်ပါးနေပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပေါများနေတဲ့ယနေ့ခေတ်တွင် အလုပ်ရှင်များဟာ အရင်ကထက် ပိုမို၍ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားလျှက်ရှိနေကြပါတယ်။ မကြာသေးမှီက Bureau of Labor Statistics (BLS) မှ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) တစ်ခုတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား ၃.၅ သန်းခန့်ဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်များမှ လစဉ်နှုတ်ထွက်လေ့ရှိနေကြတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဝန်ထမ်းအသစ်တစ်ဦးကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ရာအတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစွမ်းအားနဲ့ငွေကြေးကုန်ကျမှုပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်းတွင် မည်မျှကုန်ကျမှုတွေ ရှိလာနိုင်သလဲဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်ပါက ဒီအရာဟာ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ၊ သတိထားရမယ့် လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဝန်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့ရာအတွက် အသေးစားလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ $1200 ခန့် ကုန်ကျနိုင်ပြီး ထိုသူအနေနဲ့ ပြည့်ဝတဲ့လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိအောင်မြင်နိုင်စေဖို့အတွက် ၈ပတ်မှ ၂၆ပတ်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ ဒီအချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံးသောဝန်ထမ်းများကို ဆွဲဆောင်ထားလို သင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီးထိုသို့ဖြစ်လာစေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သူတို့ကို တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင်လိုစိတ် (Engagement) ရှိလာအောင် ပြုလုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။ Engagement ရှိခြင်းဟာ လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှု အတွက် အခြေခံကျပြီး အရေးပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ခွင်ယဉ်ကျေးမှုများဟာ ကြီးပွားတိုးတက် မှုများကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ရည်မှန်းချက်များအပေါ် ဝန်ထမ်းများ အနေနဲ့ (အချိန်အား၊ လူအား) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တူညီတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုများ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်တတ်မှုများဟာ အလုပ်ရှင်များအနေနဲ့ ရရှိအောင်မြင်စေရန်လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ ဝန်ထမ်းများနဲ့ အလုပ်ရှင်များက သူတို့ရဲ့ အလုပ်ကနေ ဘာတွေကိုလိုချင်သလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲတမ်းကိုက်ညီမှုရှိနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းများကို ဘယ်လိုခြုံငုံကြည့်ရှုပြီး သူတို့ထံတွင်ရှိနေတဲ့ ထိပ်တန်းအရည် အချင်းရှိသူများကို သူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်မှန်းချက်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှုတွေ အစဉ်အမြဲရှိနေစေရန် ဘယ်လို ပြုလုပ်ရပါမလဲ?
ပထမဦးစွာ လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ သူတို့ရဲ employee value proposition (EVP) ကို သတ်မှတ်ပြီး ရေရှည်အောင်မြင်မှု ကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် ပြုလုပ်ရပါမယ်။ EVP ဆိုသည်မှာ ယှဉ်ပြိုင်သူများအကြား organization တစ်ခုကို ထင်ပေါ်စေမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် - စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတဲ့ candidate တစ်ဦးဟာ organization ၂ ခုထံမှ အလုပ် offer ၂ ခုကို တပြိုင်နက်ရရှိခဲ့ပါက၊ အခြားဘက်ကပေးအပ်လာတဲ့ offer ထက် သင့်ရဲ့ အလုပ် offer ကို ရွေးချယ်စေဖို့ သူ့ကို ဘယ်အရာကတွန်းအားပေးစေနိုင်ပါသလဲ? သင့် organization ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရည်မှန်းချက်နဲ့ တန်ဖိုးများဟာ သူနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနေလို့လား? လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သူ များကို သင်က အသိအမှတ်ပြုပြီး ဆုကြေးငွေများ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များပေးတတ်လို့လား? သူတို့ကိုအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနဲ့ထောက်ပံ့ပေးပြီး သူတို့ရဲ့ career တွင် တိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ပြုလုပ်ပေးတတ်လို့လား? ဒါမှမဟုတ် သင့်ဝန်ထမ်းများကို သင်ပေးနေတဲ့ လစာငွေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် (သို့) အခြားသော creative perk တွေကိုနှစ်သက်မှုရှိလို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ မတူတဲ့အရာများကို တန်ဖိုးထား (အလေးထား) ကြမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် EVP ကို ပိုမိုတောင့်တင်းမှုရှိစေရန်ပြုလုပ်ခြင်းဟာ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားပါဝင်တတ်ပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ထမ်းများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့၊ သူတို့တွေ တည်မြဲနေစေဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အသိအမှတ်ပြုခြင်းများဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ပြနိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ သူများနဲ့ team များကို ထင်ရှားလာစေရန်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် လူအသစ်များကိုလဲ အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ ဘယ် လိုမျိုးလဲဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသပေးနိုင်ပါတယ်။
Value system တစ်ခုအပေါ်အခြေခံ၍ ဝန်ထမ်းများကို ဆုကြေးငွေများပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်များဟာ ဝန်ထမ်းများနဲ့ အောင်မြင်မှုများကို ရရှိရန် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို ပြောကြားရင်း ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကို အစဉ်အမြဲဆက်သွယ်ပြောကြားနိုင်ပြီး ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တလောလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လေ့လာချက်များအရ HR professional များရဲ့ ၉၀% က သင့်တော်လုံလောက်သော employee reward recognition program ဟာ ဝန်ထမ်းအလုပ်မှထွက်ခွာနှုန်းများကို လျော့နည်းစေပြီး လုပ်ငန်းရလာဒ်များကို တိုးတက် ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို လက်ခံထားကြတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ value proposition ကို သတ်မှတ်၊ ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ဝန်ထမ်းများကို ရှေ့တန်းတင်ထားတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို စတင်ရေးဆွဲပြီးပြီဆိုပါက ခက်ခဲမှုရှိနိုင်တဲ့အရာဟာ ဒီစနစ်များကို နေရာတကျရှိနေစေရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ သင့်ဝန်ထမ်းများဟာ သူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းများကနေတဆင့် အကောင်းဆုံးအရာများကို ရရှိနိုင်ဖို့ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ တသားတည်းဖြစ်နေစေဖို့အတွက် လုပ်ငန်းရှင်များဟာ reward and recognition strategy များကိုကြည့်ရှုပြီး ဘယ်အရာက သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ ကို ရှာဖွေဆုံးဖြတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်တွင်တော့ အဆိုပါနည်းစနစ်များကို အစဉ်အမြဲ ဆက်လက်၍ကြံ့ခိုင်မှု ရှိစေရန် သင့်တော်တဲ့ လမ်းကြောင်းများကိုအသုံးပြု၍ အားဖြည့်ပေးရပါမယ်။
ဝန်ထမ်းများကို အသိအမှတ်ပြုပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး digital နည်းအား ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြောဆိုနိုင်မည့်နေရာများနဲ့ အခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးပြုလုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။ ဒီအရာတွင် video conference call များ ပိုမို၍ပြုလုပ်နိုင်စေမည့် tool များ၊ instant message များ (သို့) လုပ်ငန်းအတွင်းရှိလူများ အနေ နဲ့ ဆောင်းပါးများရေးသားကာ တင်နိုင်မည့် blog များ အစရှိသည်တို့ ပါဝင်နေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အလုပ်ရှင်များ အနေနဲ့ peer-to-peer recognition (တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစား အသိအမှတ်ပြုခြင်း) ကိုဖော်ဆောင်ကာ ဆုပေးသည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်နှင့်အတူ social recognition wall တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီး ဝန်ထမ်းများရဲ့ လက်တွေ့ ဘဝ အတွင်းက အောင်မြင်မှုများကိုလဲ ဖော်ပြထားပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်အောင်မြင်မှုများကို ချီးမွမ်းမှုများရှိနေတာကို တွေ့ရှိနေရတဲ့အတွက် အဝေးမှအလုပ်လုပ်နေသူဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လဲ လုံခြုံမှုရှိပြီး သူတို့ကိုတန်ဖိုးထားမှုရှိတယ်လို့ ခံစားရစေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အပြင် ဝန်ထမ်းများကို ecard များနဲ့ ဆုများတွင် react များနဲ့ comment များပေးစေပြီး interaction များကိုလဲ အားပေးထောက်ခံမှုပြုလုပ်ရပါမယ်။ နောက်ဆုံးတွင် သင့်ရဲ့ HR platform များကတဆင့် သင့်ရဲ့ brand ကို ပြသပြီး ခိုင်မာမှုရှိစေရန်အတွက်ပြုလုပ်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်အနေနဲ့အသုံးချကာ သင့်ဝန်ထမ်းများအတွက် ပိုမို၍ engage ဖြစ်စေပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့အကြုံများကို ရရှိရန်ကြိုးပမ်းလိုက်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါက သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ tool များအားလုံးကို ဝန်ထမ်းများအားလုံးဝင်ရောက် အသုံးပြုနိုင်စေမယ့် one-stop-shop တစ်ုခုကိုလဲပြုလုပ်ပေးပြီး သင့်လုပ်ငန်းဟာ အလုပ်လုပ်ရန် ကောင်းမွန်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားစေရန်အတွက် voluntary benefit များ၊ ပြောဆိုဆက်ဆံပုံများ၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းများ၊ နဲ့ အခြားသောအရာများကို ပြသထားလိုက်ပါ။
အဆုံးသတ်တွင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် အဆင်ပြေတဲ့အရာများဟာ အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်တော့ အဆင်ပြေချင်မှ ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဝန်ထမ်းများရဲ့ လိုအပ်ချက်များနဲ့ တန်ဖိုးထားတဲ့အရာများက ဘာတွေလဲဆို တာကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့အတွက် အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် သူတို့ကို စိတ်ပါဝင်စားတက်ကြွစွာရှိနေ စေဖို့အတွက်နဲ့ သင့်ကုမ္ပဏီရည်မှန်းချက်များနဲ့ တသားတည်းကျနေဖို့ စနစ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲရခြင်းမှာလည်း ပို၍တောင် အချိန်လိုအပ်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့စိတ်အားတက်ကြွမှုရှိပြီးပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်လိုစိတ် ရှိစေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို အလုပ်လုပ်ရန်ကောင်းမွန်တဲ့ နေရာတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားလာစေမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များကို ရရှိအောင်မြင်နိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။